Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - Activities
fahasahiranana: mora , medium , sarotra , tena sarotra
[ , ] Ny olana momba ny algorithmika dia olana amin'ny Google Flu Trends. Vakio ny taratasy nosoratan'i Lazer et al. (2014) , ary manorata mailaka fohy sy mazava ho an'ny injeniera iray ao amin'ny Google manazava ny olana ary manome hevitra ny fomba hamahana azy io.
[ ] Bollen, Mao, and Zeng (2011) milaza fa azo ampiasaina ny angona azo avy amin'ny Twitter mba hampahafantarana ny tsenam-bola. Io fitadiavana io dia nitarika ny famoronana vola hetra-Derwent Capital Markets - hampiasa vola amin'ny tsenambola mifototra amin'ireo angona nangonina avy amin'ny Twitter (Jordan 2010) . Inona no porofo tianao hoentina alohan'ny hametrahana ny volanao ao amin'io vola io?
[ ] Raha toa ny mpitsoa-ponenana momba ny fahasalamam-bahoaka sasany dia mihevitra ny e-cigarettes ho fanampiana amin'ny fidirana amin'ny fifohana sigara, ny sasany dia mampitandrina momba ireo mety ho tratran'ny loza, toy ny hakitroka ambony. Alao sary an-tsaina hoe manapa-kevitra ny mpikaroka iray hianatra ny hevitry ny besinimaro momba ny e-sigarettes amin'ny fanangonana ny Twitter e-sigarettes mifandraika sy mitarika ny fanadihadiana.
Inona ireo fisainana telo mety tena manahirana anao amin'ity fandinihana ity?
Clark et al. (2016) dia nanao fandalinana toy izany. Voalohany, nanangona tweets 850.000 izy ireo izay nampiasa ny teny faneva mifandraika amin'ny sigara tamin'ny Janoary 2012 ka hatramin'ny Desambra 2014. Raha tsikaritr'izy ireo akaiky kokoa, dia nahatsikaritra fa maro amin'ireo bitsika ireo no automated (izany hoe tsy noforonin'ny olombelona) ary maro amin'ireo tweets ireo no tena nampiasaina. dokam-barotra. Namolavola algorithm fitadiavam-bahaolana izy ireo mba hanasokajiana bitsika manandanja avy amin'ny bitsika organika. Ny fampiasana an'io algorithm finday io dia nahatsikaritra fa 80% n'ny tweets dia novaina. Manova ny valinteninao amin'ny ampahany (a) ve ity fitakiana ity?
Rehefa nampitaha ny fihetseham-po tamin'ny bitsika organika sy automated ry zareo dia nahita fa ny bitsika momba ny automata dia tsara kokoa noho ireo sioka biolojika (6.17 vs 5.84). Manova ny valinteninao amin'ny b) ity fitakiana ity?
[ ] Tamin'ny Novambra 2009, ny Twitter dia nanova ny fanontaniana tao amin'ny biraon'ny bitsika avy amin'ny "Inona no ataonao?" Mankany "Inona no mitranga?" (Https://blog.twitter.com/2009/whats-happening).
Ahoana araka ny eritreritrao no hisy fiantraikany amin'ny fiovan'ny bitsika sy / na ny bitsika?
Lazao ny tetik'asa fikarohana iray izay tianao handraisana ilay bitsika hoe "Inona no ataonao?" Hazavao ny antony.
Lazao ny tetikasam-pikarohana iray izay tianao handraisana ny bitsika hoe "Inona no mitranga?" Hazavao ny antony.
[ ] Ny "Retweets" dia matetika ampiasaina handrefesana ny fiantraikany sy ny fielezan'ny fitaomana ao amin'ny Twitter. Tamin'ny voalohany, ny mpampiasa dia mila mamaky sy mametaka ny bitsika nalefan'izy ireo, mariho ny mpanoratra tany am-boalohany miaraka amin'ny feheziny, ary mariho ny "RT" manoloana ny bitsika mba hanondroana azy fa retweet izany. Avy eo, tamin'ny 2009, Twitter dia nanampy ny bokotra "retweet". Tamin'ny Jona 2016, ny Twitter dia nahatonga ny mpiserasera hamerina nibitsika ny bitsiny manokana (https://twitter.com/twitter/status/742749353689780224). Heverinao ve fa tokony hisy vokany eo amin'ny fomba fampiasanao ny "fijerinao" amin'ny fikarohana ataonao ireo fiovana ireo? Nahoana?
[ , , , ] Nanazava ny lahatsoratr'i Michel sy ny mpiara-miasa (2011) ny votoatin'ny boky navoaka dimy tapitrisa mahery tamin'ny fiezahana hamantatra ireo fironana ara-kolontsaina maharitra. Ny tahirin-kevitra nampiasainy dia navoaka ho ny daty Google NGrams, ary afaka mampiasa ny angon-drakitra mba hamerenana sy hanitarana ny asany.
Tao anatin'ny iray amin'ireo valim-pifidianana maro, nanamafy i Michel sy ny mpiara-miasa fa adinontsika haingana sy haingana kokoa. Ho an'ny taona manokana, milaza ny "1883", dia nanombana ny ampahany amin'ny 1-grama nivoaka tamin'ny taona 1875 hatramin'ny 1975 izay "1883". Nihevitra izy ireo fa io ampahany io no lanjan'ny liana amin'ny zava-nitranga nitranga tamin'ity taona ity. Araka ny tarehimarika 3a, izy ireo dia nanamboatra ny làlana fampiasàna nandritra ny telo taona: 1883, 1910, ary 1950. Ireo telo taona ireo dia mizara fomba iombonana: fampiasana kely talohan'io taona io, avy eo tsikelikely, dia mihena. Avy eo, mba hamandrihana ny tahan'ny faharavana ho an'ny taona tsirairay, i Michel sy ny mpiara-miasa dia nanisa ny "antsasaky ny fiainana" isan-taona nandritra ny taona rehetra teo anelanelan'ny taona 1875 sy 1975. Araka ny tarehimarika 3a (sary) dia nasehony fa ny antsasaky ny fiainan'ny tsirairay dia mihena ny taona, ary nanamafy izy ireo fa midika izany fa manadino ny lasa haingana sy haingana kokoa isika. Nampiasa ny Version 1 amin'ny corpus amin'ny teny Anglisy izy ireo, fa avy eo dia navoakan'ny Google ny dika faharoa amin'ny corpus. Azafady azafady azafady ny ampahany rehetra amin'ilay fanontaniana alohan'ny hanombohanao ny fampilazana.
Ity hetsika ity dia hanome anao hampihatra kopia azo ampiasaina, mamantatra ny valiny, ary ny angon-drakitra (toy ny fiasana amin'ny rakitra tsy mahazatra sy ny fandefasana angona tsy misy). Ity asa atao ity koa dia hanampy anao hitsangana sy hihazakazaka miaraka amin'ny tahiry mahaliana sy mahaliana.
Alao ny angon-drakitra mivoaka avy amin'ny tranokala Google Books NGram Viewer. Amin'ny tena manokana, tokony hampiasa ny version 2 amin'ny corpus amin'ny teny Anglisy, izay navotsotra tamin'ny 1 Jolay 2012. Tsy voafehy io rakitra io fa 1.4GB.
Amboary ny ampahany lehibe amin'ny isa 3a an'i Michel et al. (2011) . Mba hamerenana io sary io dia mila doka roa ianao: ilay iray izay nakarinao ampahany (a) sy ny antontan-taratasy "totala", izay azonao ampiasaina hanovozanao ny isam-bolana. Mariho fa ny tontolon'ny fitambarana dia manana rafitra izay mety hahatonga azy ho sarotra ny hamaky. Ny version 2 amin'ny data NGram dia miteraka vokatra mitovy amin'ireo naseho tao amin'i Michel et al. (2011) , izay mifototra amin'ny angon-drakitra 1?
Hevero ny mari-pamantarana misy anao eo amin'ilay grafan'ny NGram Viewer.
Amboary ny tarehimarika 3a (endrika lehibe), fa manova ny \_(y\_) -axis ho marika an-tsoratra (fa tsy ny tahan'ny voatsikera).
Moa ve ny fahasamihafana misy eo amin'ny (b) sy (d) no mahatonga anao hamerina handinika indray ny vokatry ny Michel et al. (2011). Nahoana?
Ankehitriny, amin'ny fampiasana ny ampahany amin'ny fanamarihana, dia mamerina mamerina ny endriky ny 3a. Izany hoe, isan-taona eo anelanelan'ny 1875 sy 1975, dia manombatombana ny antsasaky ny vanin'io taona io. Ny antsasaky ny fiainana dia voafaritra fa ny isan'ny taona izay mandalo mialoha ny ampahany amin'ny filazana dia mahatratra ny antsasaky ny lanjany ambony. Mariho fa i Michel et al. (2011) manao zavatra sarotra kokoa amin'ny fanombanana ny antsasaky ny fiainana - jereo ny fizarana III.6 ao amin'ny Information Information Online - saingy milaza izy ireo fa ny vokatr'izany dia mamokatra vokatra mitovy. Ny vokatry ny version 2 amin'ny data NGram dia mamokatra valiny mitovy amin'izay omen'i Michel et al. (2011) , izay mifototra amin'ny angon-drakitra 1? (Tazony: Aza gaga raha tsy izany.)
Moa ve nisy taona maro izay nanilika toy ny taona izay hadinon'ny tena haingana sa tena mora miadana? Lazao fohy fohifohy momba ny antony mety ho an'io lamina io ary hazavao ny fomba namaranao ireo olona ivelan'ny trano.
Ampiasao ity valiny ity ho an'ny version 2 amin'ny data NGrams amin'ny teny Sinoa, Frantsay, Alemana, Hebreo, Italiana, Rosiana ary Espaniola.
Ny fampitahana amin'ny fiteny rehetra, nisy taon-java-manilika, toy ny taona izay nohadinoina haingana indrindra na be miadana be? Lazao fohy fohifohy momba ny antony mety ho an'io lamina io.
[ , , , ] Penney (2016) raha toa ny fampahalalam-baovao maromaro momba ny fanarahamaso NSA / PRISM (ie, ny fanambarana Snowden) tamin'ny volana jona 2013 dia tafiditra tamin'ny fihenam-bidy tampoka teo amin'ny fifamoivoizana tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Wikipedia momba ireo lohahevitra izay mampiady hevitra momba ny fiarovana. Raha izany no izy, dia miova ny vokatr'izany fiovana izany amin'ny fiakaran'ny hafanam-po. Ny fomba Penney (2016) dia indraindray antsoina hoe famolavolana andian- tsipika efa voafafa, ary mifandraika amin'ny fomba fiasa voalaza ao amin'ny fizarana 2.4.3.
Mba hisafidianana ireo teny fanalahidy lohahevitra, dia nanondro ny lisitra ampiasain'ny Departemanta Amerikana momba ny Homeland Security i Penney amin'ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny media sosialy. Ny lisitry ny DHS dia mamaritra ireo teny fikarohana sasantsasany momba ny olana maro, izany hoe ny "Health Concern," "Security Infrastructure," ary ny "Terrorism." Ho an'ny vondrona fandalinana dia nampiasa ireo teny fototra 48 mifandraika amin'ny "Terrorism" i Penney (jereo ny tabilao appendix 8 ). Ny fametrahana sehatra Wikipedia lahatsoratra dia manisa isa iray isam-bolana ho an'ireo lahatsoratra 48 Wikipedia mifandraika amin'ny vanim-potoana 32 volana, manomboka ny voalohan'ny volana janoary hatramin'ny faran'ny volana Aogositra 2014. Mba hanamafisana ny soso-keviny dia namorona vondrona fampitahana ihany koa izy tamin'ny fanaraha-maso fanehoan-kevitra momba ny lohahevitra hafa.
Ankehitriny, hamoaka sy hanitatra an'i Penney (2016) . Ny antontam-baovao mavesatra izay ilainao amin'izany asa izany dia azo jerena ao amin'ny Wikipedia. Na azonao azonao avy amin'ny wikipediatrend (Meissner and R Core Team 2016) . Rehefa manoratra ny valinteninao ianao dia fantaro hoe iza no loharano nampiasainao. (Mariho fa ity hetsika iray ity ihany koa dia hita ao amin'ny toko 6.) Ity asa ity dia hanome anao ny fampiasana amin'ny angon-drakitra sy ny eritreritra momba ny fanandramana voajanahary amin'ny loharanom-baovao lehibe. Hahazo anao koa izy ary hihazakazaka miaraka amin'ny loharanom-baovao mahaliana mety ho an'ny tetikasa ho avy.
Vakio ny Penney (2016) ary hamerina ny sariny 2 izay mampiseho ny pejy amin'ny pejy momba ny "Fampihorohoroana" mifandraika amin'ny taloha sy aorian'ny fanambarana Snowden. Hamarino ireo zava-baovao.
Manaraka, mamisavisa ny endri-tsoratra 4A, izay mampitaha ny vondrona fandaharam-pianarana (lahatsoratra "Fampihorohoroana") miaraka amin'ny vondrona comparator iray mampiasa teny fanalahidy sokajiana araka ny "DHS & Other Agencies" avy amin'ny lisitry ny DHS (jereo ny takelaka appendix 10 sy ny fanamarihana ambany pejy 139). Hamarino ireo zava-baovao.
Ampahany (b) no nampitahanao ny vondrona fianarana miaraka amin'ny vondrona comparator iray. Nampitahaina tamin'ny vondrona mpifanila roa hafa ihany koa i Penney: "articles infrastructures" (appendix latabatra 11) sy pejy malaza Wikipedia (tabilao appendix 12). Miaraha amin'ny vondrona mpifarimbona hafa, ary tadiavo raha toa ny fikarohana avy amin'ny ampahany (b) mifandray amin'ny safidinao amin'ny vondrona comparator. Iza no safidy tena mahatsapa? Nahoana?
Penney dia nilaza fa ny teny fototra mifandraika amin'ny "fampihorohoroana" dia nampiasaina hifidianana ny lahatsoratra Wikipedia satria ny governemanta amerikana dia nanondro ny fampihorohoroana ho toy ny fanamarinana manan-danja amin'ny fomba fitiliana an-tserasera. Ho fanamarinana ireo teny fanalahidy 48 ireo "fampihorohoroana", Penney (2016) ihany koa dia nanao fanadihadiana momba ny MTOUR, nangataka ireo namaly ireo mpandika teny mba handinika ny teny fototra amin'ny ht, momba ny olana momba ny governemanta, ny fahaleovan-tena, ary ny fisorohana (tabilao misy eo anelanelan'ny 7 sy 8) ). Ambarao ny fanadihadiana momba ny MTUR ary ampitahao ny valiny.
Raha miorina amin'ny valiny amin'ny ampahany (d) sy ny famakinao ny lahatsoratra, manaiky ve ianao amin'ny fisafidianan'i Penney ny teny fanalahadiny ao amin'ny vondrona fianarana? Nahoana? Raha tsy izany, inona no tianao holazainao?
[ ] Efrati (2016) nitatitra, mifototra amin'ny fampahalalam-baovao tsiambaratelo, fa ny "fizaràna tanteraka" tao amin'ny Facebook dia nandao ny taona 5.5% teo ho eo tamin'ny taona raha toa ka "21% isan-taona kosa ny" fampielezam-peo tamin'ny voalohany ". Ity fihenam-bidy ity dia tena niavaka tamin'ireo mpampiasa Facebook 30 taona. Ny tatitra dia nanondro ny fihenan'ny toe-javatra roa. Ny iray dia ny fitomboan'ny isan'ireo "namana" olona ao amin'ny Facebook. Ny iray hafa dia ny fifampizarana fizarana sasany dia nalefa ho an'ny hafatra sy ny mpifaninana toy ny Snapchat. Ny tatitra ihany koa dia nanambara fa ny tetikasa Facebook marobe no niezaka nanatsara ny fizarana, ka tafiditra ao anatin'izany ny algorithm amin'ny alàlan'ny Feed Feed Algorithm izay mahatonga ny lahatsoratra tany am-boalohany ho mendri-kaja, ary koa ny fampahatsiahivana isan-karazany ny lahatsoratra tany am-piandohana miaraka amin'ny endri-tsoratra "Amin'ity andro ity". Inona ny vokany, raha misy, moa ve ireny fikarohana ireny ho an'ny mpikaroka izay te hampiasa Facebook ho loharanom-baovao?
[ ] Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny sociologista sy ny mpahay tantara? Araka an'i Goldthorpe (1991) , ny fahasamihafana lehibe dia ny fanaraha-maso ny fanangonana tahiry. Ny mpahay tantara dia voatery hampiasa ny relika, fa ny sosiology kosa dia afaka mamolavola ny tahirin-keviny ho an'ny tanjona manokana. Vakio ny Goldthorpe (1991) . Ahoana ny fahasamihafana eo amin'ny sosiolojia sy ny tantara mifandraika amin'ny hevitry ny custommades sy readymades?
[ ] Izany dia miorina amin'ny quesiton teo aloha. Goldthorpe (1991) dia namoaka valinteny mafonja maromaro, anisan'izany i Nicky Hart (1994) izay nanohitra ny fanoloran-tenan'i Goldthorpe mba hametrahana angon-drakitra. Mba hamaritana ny mety ho fetran'ny rakitra maoderina, dia nanoritsoritra ny tetikasa tetikasa mendri-kaja i Hart, hany fanadihadiana goavana mba handrefesana ny fifandraisana misy eo amin'ny sokajy sosialy sy ny fifidianana izay notarihin'i Goldthorpe sy ny mpiara-miasa tamin'ny taona 1960. Tahaka ny nantenain'ny manam-pahaizana iray izay naneho fankasitrahana ny angon-drakitra noforonina momba ny angon-drakitra hita, nanangona tahirin-kevitra izay natambatra tamin'ny tetikasa vao haingana momba ny ho avin'ny sokajy sosialy amin'ny vanim-potoana mitombo ny fari-piainana iainana. Saingy, "nanadino" i Goldthorpe sy ny mpiara-miasa mba hanangona vaovao momba ny fitondrantenan'ny vehivavy. Toy izao no namintinan'i Nicky Hart (1994) ny fizarana iray manontolo:
"... sarotra ny manalavitra ny fehin-kevitra hoe nesorina ny vehivavy satria ity 'tailor made' 'ity dia naparitaky ny lojikan'ny paradigmatika izay nanilika ny traikefa vehivavy. Nofaritan'ny fanadihadiana iray momba ny fahatsiarovan-tenan'ny kilasy sy ny asany amin'ny maha-lahy sy maha-vavy azy ..., Goldthorpe sy ireo mpiara-miasa dia nanamboatra porofo manaparitaka izay nanomezany sy nokolokoloiny ny hevitr'izy ireo manokana raha tokony hampiharihary azy ireo amin'ny fitsapana marina ny mifanentana. "
Nitohy i Hart:
"Ny vokatry ny tetik'asa momba ny asa mahatsiravina dia milaza amintsika bebe kokoa momba ny soatoavin'ny masculinista tamin'ny taon-jato momba ny sosiolojia fa tsy mampahafantatra ny fizotran'ny ady, ny politika ary ny fiainana ara-nofo."
Azonao atao ve ny mieritreritra ohatra hafa izay ahitanao ny fanangonana angona angona azo avy amin'ny tahirin-tsakafon'ny data ao anatiny? Ahoana no mampitovy an'io algorithmika io? Inona no mety ho vokatr'izany raha ny mpikaroka no tokony hampiasa harona vita amin'ny kodiarana ary amin'ny fotoana tokony hampiasany custommades?
[ ] Ao amin'ity toko ity, dia nanohitra ny angon-tsakafon'ny mpikaroka ny mpikaroka miaraka amin'ny firaketana ara-panjakana noforonin'ny orinasa sy ny governemanta. Ny olona sasany dia miantso ireo firaketana ara-panjakana ireo hoe "fandraketana finday", izay mifanohitra amin'ny "données données". Marina fa misy mpikaroka hita ao anaty rakitra ara-panjakana, saingy tena natsangana izy ireo. Ohatra, miasa mafy ireo orinasa teknika ankehitriny mba hanangona sy hikaroka ny angon-draketrany. Noho izany, ireo rakitra ara-panjakana ireo dia hita sy noforonina, miankina fotsiny amin'ny fomba fijerinao (sary 2.12).
Ny sary 2.12: Ny sary dia sady androbe no bitika; Ny zavatra hitanao dia miankina amin'ny fomba fijerinao. Ny loharanom-baovao lehibe dia hita sy noforonina; Indraindray, ny zavatra hitanao dia miankina amin'ny fijerinao. Ohatra, ny rakitra an-tsoratra nangonina navoakan'ny orinasan-telefaona finday dia hita avy amin'ny fomba fijerin'ny mpikaroka iray. Saingy, ireo firaketana mitovy ireo dia noforonina avy amin'ny fomba fijerin'ny olona iray miasa ao amin'ny departemantan'ny fandefasana ny orinasan'ny telefaona. Loharano: Popular Science Monthly (1899) / Wikimedia Commons .
Manomeza ohatra iray momba ny loharano ahitàna ny fahitana azy io ho hita sy novolavolaina dia manampy amin'ny fampiasana io loharano io ho an'ny fikarohana.
[ ] Tamin'ny famoahana an-tsaina iray, ny kristian Sandvig sy Eszter Hargittai (2015) nanasaraka ny fikarohana dizitaly amin'ny sokajy roa lehibe, izay miankina amin'ny hoe "fitaovana" na "zavatra fianarana" ny rafitra dizitaly. Ohatra iray momba ny karazana voalohany - izay misy ny rafitra fitaovana-dia ny fikarohana nataon'i Bengtsson sy ny mpiara-miasa (2011) momba ny fampiasana angona finday amin'ny finday mba hijerena ny fifindra-monina taorian'ny horohorontany tany Haïti tamin'ny taona 2010. Ohatra iray amin'ny karazana faharoa-izay toeram-pijerena ny rafitra-dia fikarohana nataon'i Jensen (2007) momba ny fomba fiantraikan'ny fampidirana ireo finday manerana an'i Kerala, India, ny fiasan'ny tsena. Tsapako fa manampy ity fisaraham-bazana ity satria manazava fa ny fanandramana mampiasa loharanom-pahitalavitra nomerika dia mety manana tanjona samihafa na dia mampiasa ny loharanom-baovao mitovy aza izy ireo. Mba hanamafisana bebe kokoa io fiavahana io dia farito ny fandalinana efatra izay hitanao: roa izay mampiasa rafitra nomerika ho fitaovana ary roa izay mampiasa rafitra nomerika ho fitaovana fianarana. Azonao atao ny mampiasa ohatra avy amin'ity toko ity raha tianao.